निर्देशकहरूलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले भने– ‘सरकारी अस्पतालको रूप फेरौं, पैसाको चिन्ता नगर्नुस्’ – Health Post Nepal
निर्देशकहरूलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले भने– ‘सरकारी अस्पतालको रूप फेरौं, पैसाको चिन्ता नगर्नुस्’
२०७८ भदौ २७ गते १९:२३
‘राति हेर्दा अस्पताल झलमल्ल होस्, आकस्मिक कक्षमा राम्रा बेड र एसी होस्, शौचालय सफा होस्, आकस्मिक कक्ष नजिकै शल्यकक्ष पनि होस्।’
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ आइतबार मन्त्रालयको सभाहलमा उपत्यकाका ठूला सरकारी अस्पतालका निर्देशकहरूलाई सम्बोधन गर्दै थिए।
श्रेष्ठले सरकारी अस्पताल सुधारका लागि आफूले सोचेका योजना सुनाइरहँदा सभाकक्षमा ‘पिनड्रप साइलेन्स’ थियो।
उनी यत्तिमै रोकिएनन्।
‘सरकारी अस्पताल भन्ने बित्तिकै अस्तव्यस्त, भीडभाड, भुइँमै मान्छे सुतिरहेको, भद्रगोल, दुर्गन्धित शौचालययुक्त हुन्छन् भन्ने आमधारणा परिवर्तन हुनेगरी काम गरौं।’
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको छोटो समयमै कोरोना खोपको सुनिश्चितता गरेका मन्त्री श्रेष्ठले अबको आफ्नो ‘स्टेप’ सार्वजनिक अस्पताल सुधारमा चाल्ने बताए।
त्यसैका लागि श्रेष्ठले संघीय सरकारअन्तर्गतका २२ मध्ये उपत्यकाका ठूला अस्पतालका निर्देशकहरूलाई आइतबार मन्त्रालय बोलाएका थिए।
कार्यक्रम सुरुवातमै श्रेष्ठले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भ्रमण गरेका विभिन्न अस्पतालका दृष्टान्त निर्देशकहरूलाई सुनाए।
‘मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै मैले पब्लिक हस्पिटल सबल बनाउनुपर्छ भनेर विभिन्न अस्पताल गएँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘आकस्मिक सेवामा गुणस्तर पुगेकै छैन, सरकारी अस्पतालमा समयसापेक्ष सुधार गरिएन भने जनताको विश्वास गुम्दै जान्छ।’
उनले अधिकांश अस्पताल पूर्वाधार सम्पन्न भएका, स्रोतको पनि खासै अभाव नभएपछि सोच र उचित व्यवस्थापन अभावमा जनताले दुःख पाइरहेको टिप्पणी गरे।
‘पित्तथैलीको पत्थरी फाल्न महिनौं कुर्नपर्ने अवस्था रहेछ, बीमाकै पैसा पनि सरकारीभन्दा निजीबाट बढी जाँदो रहेछ। बरु के चाहिन्छ जोहो गरौं, सरकारी अस्पताल सुधारौं,’ उनले भने।
मन्त्री श्रेष्ठले अस्पताल सरसफाइ, चिटिक्क वातावरण, व्यवस्थित र एसीयुक्त आकस्मिक कक्ष, सफा शौचालयजस्ता साना विषयबाट सुधारको प्रस्तावसमेत राखे।
‘तपाईंहरूसँग बजेट छ भने योजना बनाएर ल्याउनुस्, छैन भने म स्रोत खोज्छु, पैसाको चिन्ता नगर्नुस् सरकारी अस्पताल राम्रो बनाऔं, आँट्यो भने पुग्छ,’ उनले प्रस्ताव गरे।
उनले सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि महिनाैं लामो प्रतिक्षा हुने गरेको भन्दै जनशक्ति अभाव भएको अवस्थामा बाहिरबाट जनशक्ति ल्याएर भए पनि पब्लिकलाई सेवा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे।
उनले अर्बौं कमाउने बैंकहरू संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) को बजेट अस्पताल सुधारमा खर्चिन तयार रहेको समेत बताए। ‘मैले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग पनि कुरा गरेको छु, उहाँहरू यो अभियानमा साथ दिन तयार हुनुहुन्छ,’ उनले भने।
श्रेष्ठले अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी कमी रहेको तथ्य आफूले बुझेको भन्दै त्यसको वृद्धि गर्न सरकार तयार रहेको सुनाए। सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति थप गर्न, उपकरण सम्पन्न बनाउन, विस्तारित सेवा लागू गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै त्यसमा निर्देशकहरूको साथ चाहिएको उनको भनाइ थियो।
‘सरकारी अस्पताल राम्रो वा नराम्रो जे भए पनि जस–अपजस तपाईहरूकै हो, एउटा संस्थामा १० जनाले मात्रै राम्रो गरौं सयौंले त्यसलाई फलो गर्छन्,’ श्रेष्ठले भने।
मन्त्री श्रेष्ठको भनाइपछि बोल्ने अधिकांश अस्पतालका निर्देशकले अस्पतालका समस्या सुनाउँदै सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाएका थिए। कान्ति अस्पतालका निर्देशक डा. अजित रायमाझीले कान्तिमा उपत्यका र देशभरिबाट बिरामी आउने भएकाले अत्यधिक चाप रहेको र आकस्मिक कक्षमा समेत लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था रहेको स्वीकारे।
‘भीड भए पनि गम्भीर बिरामीले समयमै सही उपचार पाओस् भनेर ओपिडीमा पनि इजी क्यु र आकस्मिक कक्षमा ट्रियाज लागू गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा नहुँदा धेरै समस्या छ।’
गंगालाल हृदय उपचार केन्द्रका निर्देशक डा. चन्द्रमणि पौडेलले २ सय बेडको अस्पताल भए पनि आकस्मिक कक्षसहित २ सय ५० बेड चलाइरहेको भन्दै बिरामी कुरुवाका लागि बस्ने ठाउँ दिन नसक्दा निकै नराम्रो अवस्था देखिएको बताए।
‘कोरोनाका कारण वार्डमा भिजिटर बस्न रोकेका छौं। अहिले एक बिरामीका पाँचजनासम्म भिजिटर आइरहेका छन्, उनीहरूको भीडले नराम्रो देखिएको छ,’ डा. पौडेलले भने।
त्यसैगरी राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलले ट्रमा सेन्टरको सरसफाइ र आकस्मिक कक्ष व्यवस्थापन नमूना रहेको दाबी गरे।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डा. दिनेश काफ्लेले पनि बिरामी चापले शिक्षण अस्पतालमा एउटै बेडमा तीनजनासम्म राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे।
‘अस्पतालप्रतिको विश्वासका कारण पनि बिरामी अन्यत्र जान चाहँदैनन्, इमर्जेन्सीको भीड व्यवस्थापन निकै कठिन छ,’ उनले भने।
कोभिड युनिफाइड अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. भुपेन्द्र बस्नेत, परोपकार प्रसुती गृहकी निर्देशक डा. संगीता मिश्रा, शुक्रराज सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप बास्तोला लगायतले अस्पतालमा विद्यमान समस्या तत्काल सुधार गर्न सकिने विषयबारे धारणा राखेका थिए।
बैठकमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला, नेपाल चिकित्सक संघ अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले समेत अस्पतालको तत्काल सुधारका लागि गर्न सकिने कामबारे राज्यमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए।
प्राप्त सुझाव, अस्पतालहरूबाट आउने तत्कालीन र दिर्घकालीन सुधार योजनाका आधारमा बजेट सुनिश्चित गरेर सुधारका काम तत्काल सुरु गर्ने प्रतिबद्धता राज्यमन्त्री श्रेष्ठले गरेका थिए।
One thought on “निर्देशकहरूलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले भने– ‘सरकारी अस्पतालको रूप फेरौं, पैसाको चिन्ता नगर्नुस्’”
Parashu Ram Shrestha says:
Congratulations for great initiatives.Similarly how public health system can be proved it should go side by side.